अहिले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व गम्भीर हुनुपर्छ
फरकधार / ७ भदौ, २०७८
फरकधारको यो शृंखलामा हामीले कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुसँग महाधिवेशनपछिको कांग्रेस कस्तो हुनुपर्छ ? र, युवा नेतृत्वको सम्भावना के छ ? भनी सोध्ने छौँ । यसै क्रममा नेपाली कांग्रेस म्याग्दी​का सभापति खमवीर गर्बुजा​लाई हामीले यो शृंखलामा प्रस्तुत गरेका छौँ । )
हामी नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन गर्नैपर्ने बाध्यकारी अवस्थामा छौँ । अहिलेको नेतृत्व छान्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी क्रियाशील सदस्यहरुको हातमा छ । नेतृत्व जनताले जसलाई पत्याउँछ त्यही आउने हो । नेपाली कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी हो । यसको व्यवस्थाअनुसार यहाँ नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले जसलाई पत्याउँछ त्यसैले नेतृत्वमा जान पाउने हो ।
हामीभन्दा अग्रजहरुले नै नेतृत्व कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्ला । हामी ग्रास लेभलको कार्यकर्ताले भन्दा बढी पिर उहाँहरुमा नै हुनुपर्छ । पार्टीलाई कसरी वैधानिक बनाउने, कुन क्षमता भएको मान्छेलाई कहाँ राख्ने, कुन बाटोमा जाने भन्ने सिनियर नेताहरुले गर्ने निर्णय हो ।
युवालाई नेतृत्व दिनुपर्ने बहस सधैंजसो महाधिवेशनको मुखमा उठ्दै आएको छ । मेरो विचारमा युवाहरुको भूमिका मुख्य रुपमा कम्युनिस्ट पार्टीसँगको लडाइँमा देखिनुपर्छ । कम्युनिस्ट विचारससँगको लडाइँ नै हाम्रो मुख्य लडाइँ हो, यतिबेला ।
हामीसहित सम्पूर्ण जनताले कम्युनिस्टहरुको नांगो नाच हेरिसके । अब हामी एक भएर कम्युनिस्टसँग लड्ने हो भनेर शेरबहादुर र रामचन्द्र नबोलीकन हुँदैन । हामीले सोच्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसको भविष्य हो । त्यसलाई हेरेर नै युवा सक्रिय हुनुपर्छ ।
कांग्रेसमा परिवारवादका कुरा पनि बेलाबखत आँउछ । तर, मैले अहिले पार्टीमा यो समस्या देखेको छैन । जसलाई आमकार्यकर्ता र जनताले पत्याउँछ त्यो नै नेतृत्वमा आउने हो । जो–जो पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको छ उहाँहरुको आ–आफ्नै त्याग र तपस्या पनि त छ ।
यत्रो ठूलो पार्टीमा अलिअलि यो विषय सुनिनु नौलो कुरा त होइन । ठूला दलमा झिनामसिना कुराहरु हुन्छन्, त्यसलाई ध्यान दिनु हुँदैन । नेतृत्वले क्षमता हेर्ने हो पारिवारिक कुराहरुमा ध्यान दिनु आवश्यक छैन । अलिकति भिजन भएका युवादेखि सिनियर नेताहरु विशेषगरी कांग्रेसको भविष्यका बारेमा सोच्न सक्ने नेतृत्व चयन हुनुपर्छ ।
हाम्रो जिल्लामा क्रियाशील विवाद केही पनि छैन । मेरो जिल्लामा पहिलाको भन्दा धेरै संगठन बलियो भएको छ । यो भन्दा अघि पनि दुई दल (कम्युनिस्ट) एक भएर हारेका हौं । नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील विवादमा उठेका सानोतिनो कुरामा झगडा गर्नु हुँदैन । १३औँ महाधिवेशनमा ८–९ प्रतिशतसम्म समस्या थियो क्रियाशीलमा, तर अहिलेको अधिवेशनमा जम्मा ४–५ प्रतिशत मात्र छ ।
यतिबेला प्रतिपक्षीबाट सत्तापक्षमा नेपाली कांग्रेस पुगेको होइन । देशको परिस्थिति र जनताको विश्वासले कांग्रेस अहिले सत्तामा पुगेको हो । विभिन्न जिल्लामा बाढी–पहिरो लगायतका समस्या छन् । यो निकै गम्भीर कुरा हो । यसबारे कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले चासो राखोस् ।
मेरो सदरमुकामबाट दुर्गम वडामा पुग्न तीन दिनसम्म लाग्छ त्यो पनि सरासर हिँड्ने हो भने । बाढी–पहिरो हुँदा झनै समस्या बढेको छ । यस विषयमा सिनियर नेताहरुले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला छ । नेतृत्व पंक्तिले गम्भीर भएर सोच्दा केही समस्या नहोला । नेतृत्व गम्भीर भयो भने त प्राकृतिक समस्याका साथै पार्टीभित्रका समस्या पनि समाधान हुन गाह्रो पर्दैन ।
प्रकाशित मिति : भदौ ७, २०७८ साेमबार १७:१५:१७,